Njide aha | Law & More B.V.
blog » Ndobe nke isiokwu
Ndobe nke isiokwu
Onye nwe ya bụ ikike zuru oke mmadụ nwere ike ịnwe dị mma, dị ka Usoro Obodo si kwuo. Nke mbụ, nke ahụ pụtara na ndị ọzọ kwesịrị ịkwanyere onye nwe ya ùgwù. N’ihi ikike a, ọ bụ onye nwe ya ga-ekpebi ihe a na-eme ngwongwo ya. Iji maa atụ, onye nwe ya nwere ike ikpebi inyefe onye ọzọ ihe ọma o nwere site na nkwekọrịta izu. Agbanyeghị, maka nnyefe ziri ezi a ga-enwerịrị ọtụtụ ọnọdụ iwu. Ọnọdụ n’ikpeazụ na-enyefe ikike nke ihe ọma bụ nnyefe nke ihe ọma dị mma, dịka ọmụmaatụ site n’inyefe ya n’ụzọ nkịtị n’aka onye zụrụ ya, ọ bụghị ịkwụ ụgwọ ego nzụta dịka a na-echekarị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye na-azụ ihe na-aghọ onye nwere ihe ọma n'oge nnyefe ya.
Enweghị njide aha kwetara
Karịsịa, nke dị n'elu ga-abụ ikpe ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na onye zụrụ ya na njide aha. N'eziokwu, na mgbakwunye na nnyefe ahụ, ego nzụta yana okwu n'ime ụgwọ a nke onye zụrụ ahịa ga-akwụrịrịrịrịrịrịrị nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ. Agbanyeghị, n'adịghị ka nnyefe, (ịkwụ ụgwọ) ego ịzụrụ abụghị ihe iwu chọrọ maka ịnyefe nke onye nwe ya. Ya mere, ọ ga - ekwe omume na onye zụrụ ihe ahụ ghọrọ onye nwe ngwongwo gị, na - akwụghị ụgwọ zuru oke maka ya. Ndi onye na-azụ ahịa agaghị akwụ ụgwọ mgbe nke ahụ gasịrị? Mgbe ahụ ị gaghị enwe ike weghachite ngwongwo gị, dịka ọmụmaatụ. A sị ka e kwuwe, onye na-akwụghị ụgwọ na-akwụ ụgwọ nwere ike ịrịọ ikike enwetara nke onye nwe ya na nke ọma na ị na-atụ anya ịkwanyere ikike ya inwe ihe na ajụjụ a aka. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'ọnọdụ ahụ ị ga-anọ n'enweghị ezigbo ego ma ọ bụ kwụọ ụgwọ gị, yabụ gba aka. Otu ihe a metụtara ma ọ bụrụ na onye zụrụ ahịa na-ezube ịkwụ ụgwọ mana tupu ụgwọ a na-akwụ ya amalite, ọ ga-enwe ego. Nke a bụ ọnọdụ na-adịghị mma nke enwere ike izere n'ụzọ.
Jide aha dị ka ụzọ mgbochi
E kwuwerị, mgbochi dị mma karịa ọgwụgwọ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe amamihe iji ohere ndị enwere. Iji maa atụ, onye nwere ihe ọma nwere ike ikwenye na onye ahụ zụrụ ahịa na ọ bụ naanị onye zụrụ ya ga-enweta ya ma ọ bụrụ na onye ahụ zụrụ ya. Ọnọdụ dị otú ahụ nwere ike, dịka ọmụmaatụ, metụtakwara ịkwụ ụgwọ ego nzụta ma akpọkwa ya njigide aha. A na-achịkwa njide aha na Nkeji edemede 3:92 nke Dutch Civil Code na, ọ bụrụ na ekwenye, na-enwe mmetụta na onye na-ere ahịa na-anọgide na-ere ahịa ngwaahịa ruo mgbe onye zụrụ ahịa kwụrụ ụgwọ zuru ezu maka ngwaahịa ahụ. Njide aha na-eje ozi dị ka ụzọ mgbochi: ọ bụ na onye zụrụ anaghị akwụ ụgwọ? Ka onye na-azụ ahịa ọ ga-enwe nrụrụ ego tupu ya akwụ onye na-ere ya ụgwọ? N’ọnọdụ dị otú ahụ, onye na-ere ahia nwere ikike iweghachi ngwongwo ya n’aka onye zụrụ ya n’ihi ijigide aha ya kwuru. Ọ bụrụ na onye zụrụ ahịa anaghị akwado nnyefe nke ngwongwo ahụ, onye na-ere ahịa nwere ike ịga n'ihu ijide ya na igbu ya n'ụzọ iwu. Ebe ọ bụ na onye na-ere ere nọgidere bụrụ onye nwe ya, ọdịmma ya anaghị adaba na akụ na ụba nke onye zụrụ ya ma nwee ike kwụọ ya. Ọnọdụ nke ịkwụ ụgwọ mezuru site n'aka onye zụrụ ahịa? Mgbe ahụ (naanị) inwe ihe ọma ga-enyefe onye zụrụ ya.
Ihe atụ nke njigide nke aha: ụgwọ ịzụta
Otu n'ime azụmahịa ndị kachasị eme ka ndị ọzọ jiri njigide aha bụ ịzụta ụgwọ, ma ọ bụ ịzụta, dịka ọmụmaatụ, ụgbọ ala na ntinye nke a na-achịkwa na Nkeji edemede 7A: 1576 BW. Nzụta ịgbazite gụnyere ịzụ na ire ere na nkeji nkeji, nke ndị otu ahụ kwenyere na ọ bụghị naanị nnyefe ikike nke rere rere ka ebufere, kama ọ bụ naanị site na imezu ọnọdụ nke ịkwụ ụgwọ zuru oke nke ụgwọ onye zụrụ n'okpuru nkwekọrịta ịzụta. Nke a anaghị agụnye azụmahịa metụtara akụ na-enweghị ike ịnwe ya na ọtụtụ ihe edebanyere aha. Iwu ndị a anaghị ewepụ azụmaahịa ndị a na nzụta ego. Na ngwụcha, atụmatụ ịgbazinye ụgwọ na ebumnuche ya dị mkpa iji kpuchido onye zụrụ ya, dịka ọmụmaatụ, ụgbọ ala megide ịnata ụgwọ ịgbazinye obere ọrụ, yana onye na-ere ahịa megide ọnọdụ siri ike n'akụkụ nke onye zụrụ ya. .
Irè nke njigide nke aha
Maka ọrụ dị irè nke njigide aha, ọ dị mkpa na edere ya na ederede. Enwere ike ime nke a na nkwekọrịta ịzụta n'onwe ya ma ọ bụ na nkwekọrịta dị iche kpamkpam. Agbanyeghị, ijigide aha ka a na-edobe na usoro na ọnọdụ izugbe. N'okwu ahụ, agbanyeghị, ekwesịrị iburu n'uche na a ga-emerịrị ihe iwu chọrọ gbasara ọnọdụ izugbe. Enwere ike ịchọta ozi gbasara usoro izugbe na iwu iwu dị na otu blọọgụ anyị gara aga: General usoro na ọnọdụ: ihe ịchọrọ ịma banyere ha.
Ọ dịkwa mkpa na ọnọdụ nke ịdị irè na njigide aha a ga-etinye dịkwa mma. Iji mezuo nke a, a ga-emerịrị ihe ndị a:
enwere ike ichoputa ma obu gosiputa okwu a (kọwara)
ikpe nwere ike ọ bụghị webata na ọhụrụ ikpe
ikpe ahụ nwere ike ọ gbanweela ka ọ bụrụ ikpe ọhụrụ
Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịghara ịmepụta ndokwa gbasara njigide aha oke oke. Obere njigide aha ahaziri, ka a na-ahapụ ihe egwu karịa. Ọ bụrụ na e nyefee onye na-ere ya ọtụtụ ihe, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya, ka ihe atụ, ịhazi ka onye na-ere ere ahụ ka ọ bụrụ onye nwe ihe niile ewepụtara ruo mgbe akwụchara ụgwọ ịzụta zuru ezu, ọbụlagodi na akwụworị akụkụ nke ihe ndị a onye zụrụ ya. Otu ihe a metụtara ngwongwo nke onye zụrụ ahịa nke ngwongwo nke onye na-ere ahịa nyefere, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala na-arụ ọrụ. Na nke a, a na-akpọ nke a dị ka ogologo njigide nke aha.
Alienation site asịwo isiokwu njigide nke aha dị ka ihe dị mkpa mgbe uche
N'ihi na onye zụrụ abụbeghị onye nwe ya n'ihi ijigide aha ya, ọ bụ na enweghị ike ịme onye nwe ụlọ ọzọ. N'ezie, onye zụrụ ahịa nwere ike ime nke a site n'ire ndị ọzọ ngwaahịa ahụ, nke na-emekwa mgbe niile. Na mberede, nyere mmekọrịta dị n'ime na onye na-ere ere, enwere ike inye onye zụrụ ikike inyefe ngwongwo ahụ. N'ọnọdụ abụọ ahụ, onye nwe ya enweghị ike iweghachi ngwongwo ya n'aka ndị ọzọ. Ka emechara, njide nke aha naanị onye na-ere ahịa kwuru ka ọ zụrụ ya. Na mgbakwunye, onye nke atọ nwere ike, na ọnọdụ nke nchebe pụọ na nkwupụta dị otú ahụ nke onye zụrụ ahịa, dabere na ndokwa nke edemede 3:86 nke Civil Code, ma ọ bụ na okwu ndị ọzọ ezi okwukwe. Nke ahụ ga - adị iche ma ọ bụrụ na ndị ọzọ a maara njigide nke aha n'etiti onye zụrụ ya na onye ahụ ma ọ bụ mara na ọ bụ omenala na ụlọ ọrụ maka ngwongwo a na-ebuga napụta n'okpuru njigide aha yana na onye zụrụ ọrịa na-arịa ọrịa ego.
Njide aha bụ iwu bara uru ma sie ike. Ya mere ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkpọtụrụ onye ọka iwu ọkachamara tupu ịbanye na njide aha. Na-emeso njigide nke aha ma ọ bụ na ịchọrọ enyemaka inye ya? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Na Law & More anyị ghọtara na enweghị njide dị otú ahụ nke aha ma ọ bụ ndekọ ederede na-ezighi ezi nwere ike ịnweta oke nsonaazụ. Ndị ọkàiwu anyị bụ ndị ọkachamara n'ọhịa iwu nkwekọrịta ma nwee obi ụtọ inyere gị aka ịbịaru onwe gị aka.
Previous Post Idegharị iwu NV na oke nwoke / nwanyị
Next Post Gbanwee na ụtụ isi mbufe: ndị mbido na ndị na-etinye ego na-a attentiona ntị!